SP-L09 SOICARE 300ml osisi ọka 7 ọkụ ọkụ dị mkpa mmanụ aromatherapy ultrasonic diffuser, China SP-L09 SOICARE 300ml osisi ọka 7 ọkụ ọkụ dị mkpa mmanụ aromatherapy ultrasonic diffuser Manufacturers, Suppliers, Factory - Sunpai Industries Limited
SP-L09 SOICARE 300ml osisi ọka 7 ọkụ ọkụ dị mkpa mmanụ aromatherapy ultrasonic diffuser
SOICARE 300ml osisi ọka 7 ọkụ ọkụ dị mkpa mmanụ aromatherapy ultrasonic diffuser
· Nchekwa onwe na-enweghị mmiri na BPA Free - Site na ọrụ mmechi akpaaka na-enweghị mmiri, humidifier a ga-agbanyụ na-akpaghị aka mgbe mmiri gwụrụ. Nke a nwere ike ị na-mma ma chebe ngwaọrụ onwe ya dị ka nke ọma. Aromatherapy na-ekesa ihe na-enweghị ihe BPA, nke bụ 100% na-adịghị egbu egbu na gburugburu ebe obibi.
· Ultrasonic Technology - Ihe na-esi ísì ụtọ na-eji ebili mmiri ultrasonic eme ka mmiri na mmanụ dị mkpa na tankị, iji mepụta mmiri dị jụụ, ma kwe ka okpukpo ahụ bilie n'ikuku, moisturize ikuku. Ime ụlọ gị ga-ejupụta n’enweghị isi, nke ga - eme ka ị hie ụra nke ọma. Zuru oke maka ime ụlọ, ụlọ ọmụmụ, ọfịs, ime ụlọ, yoga, SPA, ime ụlọ, wdg.
· 7 Na-agbanwe agba agba Ikanam ọkụ - Ikanam ọkụ nwere ike ịtọ na agba 7 obi. Nwere ike ịghagharị ya site na agba asaa, ma ọ bụ tọọ ya na otu agba agba.Gharia agba dị mma na ntụgharị dị nro. Na agba agba, ọ nwere ike ịmepụta ọnọdụ ịhụnanya.
· Onyinye zuru oke - Ihe na-esi ísì ụtọ na-eji ihe eji eme osisi, dị ka ihe eji achọ mma. Ọ bụ ezigbo nhọrọ iji nke a dịka onyinye nye ndị enyi na ezinụlọ gị, ndị hụrụ n'anya.
woodgrain ultrasonic aromatherapy dị mkpa mmanụ diffuser
ABS + PC + eyi
1H / 3H / 6H / NA
SP-G10 180ml Rubber Wood Glass Ultrasonic Aromatherapy dị mkpa mmanụ Diffuser
SP-G08 180ml osisi seramiiki ultrasonic ísì ụtọ diffuser maka aromatherapy